नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं सुरु
९. गोरखा केन्द्र भएर भूकम्पकाे धक्का
१०. प्रदेश सरकारले राहतस्वरुप मृतक परिवारलाई जनही एक लाख प्रदान गर्ने
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार ०६:३५ प्रकाशित
काठमाडौं । आजबाट नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं सुरु भएको छ । दशैंको पहिलो दिन आज घरघरमा घटस्थापना गरी मनाइदैछ छ । पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्गा भवानीको कृपा तथा आशिर्वाद प्राप्त गर्न आजबाट घरघरमा ९ दिनसम्म दुर्गा भवानीको आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ ।
घट अर्थात् घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्तिस्वरुपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकाले आजको दिनलाई घटस्थापना भन्ने गरिएको हो ।